I-Freckles: ziyintoni, uziphatha njani kwaye uzifihla njani | Amadoda aQinisekileyo
Ehlabathini kukho iintlobo ezahlukeneyo zabantu. Abo bathanda amabala, kunye nabanye ababathiyileyo. Kuyafana nakwabo banabo, abanye bafuna ukufihla amabala abo kwaye abanye bayathanda ukubabonisa. Ama-Freckles awaziwa ngegama le-ephelides kwaye luhlobo lwendawo enobungozi ebonakala ngenxa yokunyuka kwe-pigment eyaziwa ngokuba yi-melanin kwi-epidermis.
Kweli nqaku siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga namabala kunye nendlela yokuwafihla.
1 Zithini amabala
2 Unyango oluphindaphindeneyo
3 Ukuthintela amarhe
4 Indlela yokufihla amabala
Imalunga namabala ahlukeneyo avela kulusu kwaye avela ngenxa yomzuzwana we-melanin pigment kwi-epidermis. Ingabonakala phantse kulo naliphi na ilungu lomzimba, nangona ezona "ziphazamisayo" zezobuso. Zibonakaliswe ngo zibenombala obumdaka ngakumbi okanye obomvu ngakumbi kwaye ayifani. Zibekwe kula malungu esikhumba abhenceke ngakumbi kwaye avele elangeni. Oku kubangela ukuba amabala afumaneke ikakhulu ebusweni, ngasemva, esifubeni, nasezingalweni. Kukho umkhwa ocacileyo wokuvela kwabo banesikhumba esimhlophe.
Kukho iintlobo ezininzi zeetypologies ngokuxhomekeke kwimvelaphi yazo. Zahlukile phakathi kwezo zikhoyo kwasekuzalweni kunye nezo zibonakala ngexesha lobuntwana, kwinqanaba lokufikisa okanye ebudaleni. Ezi zokugqibela zezona zixhaphakileyo.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokunyanga okanye ukuzifihla. Kuyamiselwa ukuba lukhona unyango olukhoyo lokuphelisa ukubonakala kwamabala esikhumbeni kwaye afunyanwa ekuthambiseni iikhrim kunye neepele. Kukho iintlobo ezithile zeelaser kunye neminye imithombo yokukhanya ekwaziyo ukususa amabala. Ezi ntlobo zimbini zokugqibela zonyango kufuneka zilawulwe kakuhle ngugqirha wesikhumba, njengoko zinokubangela ukonakala kolusu.
Ukubhenela kulo naluphi na uhlobo lwala manyathelo, kufuneka uxilongwe kwangaphambili yingcali. Yiyo le ngcali enokusebenzisa i-dermatoscope, eyimicroscope ye-confocal, okanye i-biopsy yokususa. Phakathi kweefomula zokuthambisa ezisebenza ngakumbi kwaye ezinokunceda ukuphucula ukubonakala kwamabala esiwafumanayo ihydroquinone kunye neziphumo zayo, i-retinoic acid, i-retinol, i-kojic acid kunye ne-vitamin C, phakathi kwabanye.
Nangona kunjalo, ngaphandle konyango olukhoyo ngoku, kwiimeko ezininzi kuyimfuneko ukubhenela kunyango ngeebhlorho ezilula. Kukho ezinye iipereji ezimiselweyo zenziwa ngoogqirha besikhumba abanamava ngakumbi kwaye iqulathe indibaniselwano yehydroxy acid kunye nezinye izinto ezinceda ekunciphiseni i-pigmentation kwezinye indibaniselwano. Zonke ezi zinto zidibeneyo zixhomekeke kwisigulana ngasinye.
Ukuze unyango lusebenze kakuhle kufuneka kubekho amalungiselelo alungileyo kunye nokunyamalala okungapheliyo emva kwalo. Unokubandakanya ukhuseleko oluphezulu kwimitha yelanga kwezi ntsuku zilandelayo.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba, nangona amabala angabinabungozi kwimpilo yolusu, utshintsho kuwo lunokukhokelela kwithumba elibi. Ke ngoko, kubalulekile ukuba nolawulo kwii-freckles ngokuqhubekayo ukuze wazi imeko efanayo. Ukuxilongwa kwangexesha kunokunyusa amathuba onyango ngale ndlela. Masibone ukuba yeyiphi imiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukujonga ukuba ngaba amabala ethu angabangela iingxaki:
Iasymmetry: Oku kuthetha ukuba i-freckle present is irregular in shape.
Kwimiphetho: jonga ngokukodwa ukungalingani kwemiphetho.
umbala: ukuba itshintsha umbala okanye inemibala engaphezu kwemibini, kuya kufuneka uyiqwalasele.
Ububanzi: Kubalulekile ukuhlalutya ukuba ubukhulu bungaphezulu kwe-6 mm.
Yonke le miba kufuneka ihlalutywe ngokuqhubekayo ukuthintela nasiphi na isimila esibi. Ngaphezulu kwako konke, ulumkiso kufuneka lwenziwe ehlotyeni ngenxa yokunyuka kokuchaphazeleka kwimitha yelanga. Ngaphandle kwento yokuba izithambiso zelanga zinegalelo kukhuseleko lolusu kunye nokuvela kwamabala, ayikhuseli ikhulu kwipesenti kwimitha. Kulapho kufuneka sithathele ingqalelo amanye amanyathelo othintelo ngolu hlobo lulandelayo:
Kuphephe ukubonakaliswa lilanga ngexesha leeyure ezisemini. Kwezi yure kuxa ubuninzi bemitha yelanga eyingozi ikhona kwindalo esingqongileyo.
Nxiba impahla yokukhusela: Apha singasebenzisa iminqwazi, iihempe okanye iiambrela ukusinceda sinciphise ukuvezwa lilanga.
Yiya rhoqo kugqirha wesikhumba: Umkhweli uya kuba ophetheyo ukuphonononga imiba eyahlukeneyo enjeya esele siyihlalutye kwaye siphanda ngokuzalwa kwamaqhina amatsha, kufuneka sithathele ingqalelo ukuba, ngelixa amabala azalwa engavami ukubonisa utshintsho ngokuhamba kwexesha, ezo zifunyenwe amanye amanqanaba obomi ukuba anokwahluka ngokuthe ngcembe. Inokuwonyusa umphezulu obumdaka kunye nokunciphisa isixa sombala.
Indlela yokufihla amabala
Baninzi abantu abonwabileyo namabala amade kwaye bafuna ukuwafihla. Masibone ukuba zeziphi iingcebiso eziphambili zoku:
ILimu: Yinto yendalo esinokuyisebenzisa kunyango oluninzi lobuhle kwaye ngakumbi ukunciphisa amabala esikhumba. Iyasebenza kwaye isebenza njengesithintelo kwimveliso ye-melanin. Oku kuthintela ukuvela kwamabala.
Ubisi: Nge-asidi ye-lactic equlathe, inezixhobo ezisebenza kakuhle kakhulu. Kukulungele kakhulu ukukhanyisa amabala. Ukuthambisa iphedi yomqhaphu kunye nobisi olubandayo kwaye uyisule kwindawo apho uneentsimbi khona.
Chamomile: Olunye lolona nyango lusemagqabini lokufihla amabala ebusweni. Unokwenza imaski ngokufakwa kwe-chamomile kunye nepunipoon yobusi. Kufuneka uyivumele isebenze kangangemizuzu eli-15.
makeup: Nangona kungacetyiswanga, yeyona ndlela ikhawulezayo kwaye ilula yokufihla amabala. Khetha indawo yokufihla ukuze ubenako ukubenza ukuba banyamalale ngokukhawuleza.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga namabala kunye nendlela yokuwafihla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iirobhothi